Kedu ihe bụ nlekota nke sava weebụ? | Motadata
Onye nchịkwa nchịkwa
Nchịkwa Ọrụ Nhazi
Nchọpụta Akụrụngwa IT
IT ọrụ Desk akpaaka
Njikwa tiketi IT
Nleba Anya Center
Nlele sava weebụ
Gịnị bụ nlekota nke sava weebụ?
Nleba anya nkesa webụ bụ okwu ejiri maka nsuso arụmọrụ, ahụike, na metrik nke sava weebụ iji hụ na arụ ọrụ dị elu nke sava. Site na ilekwasị anya na metrik arụmọrụ sava weebụ, ndị na-ahụ maka netwọk ga-enwe ike ịchọpụta na dozie nsogbu ahụ tupu ha emetụta ndị ọrụ njedebe.
Sava webụ bụ ebe a na-akwado ngwa, ọrụ na saịtị niile, anyị nwere ike ịnweta ha n'ịntanetị mgbe ọ bụla anyị chọrọ ha. Mgbakọ igwe ojii na-aghọ ụkpụrụ ọhụrụ n'oge a ka ọtụtụ ngwa na ọrụ na-akwaga na oghere ịntanetị. Nke ahụ pụtara nlekota sava weebụ na-aghọ ọbụna ihe dị mkpa karị iji hụ na nchekwa na ịbịaru nso nke sava ahụ.
Gịnị kpatara nlebanya sava weebụ ji dị mkpa?
Nleba anya nkesa webụ dị mkpa n'ihi na ọ na-eme ka ịnweta na mgbanwe maka akụrụngwa ịntanetị, nke bụ akụkụ dị mkpa nke ọrụ azụmahịa. Ndị ọrụ njedebe nwere ike ịchọ ọdịnaya nke sava weebụ na-achịkwa. Ya mere, nlekota nke sava weebụ nwere ike ịbụ akụkụ dị mkpa nke ịhụ na arụ ọrụ na nrụpụta ngwa na ọrụ na-arụ ọrụ dịka ihe ụlọ ọrụ chọrọ maka ọrụ azụmahịa kwa ụbọchị.
Sava dị nwayọọ nwere ike imetụta ego ụlọ ọrụ ozugbo, ebe ndị ọrụ njedebe nwere ike ịhapụ ibe weebụ ngwa ngwa ngwa ngwa. Ezubere ikpo okwu nlekota sava webụ dị ka Motadata iji chọpụta mperi na ọdịda. Ikpo okwu na-eziga ọkwa ma ọ bụ ọkwa na ndị nchịkwa netwọk iji zere ụdị ọ bụla nke oge nkwụsịtụ nkesa.
Nleba anya nkesa webụ na-arụpụtakwa nghọta dabere na ihe a chọrọ ma gosipụta mgbanwe na okporo ụzọ maka ọtụtụ weebụsaịtị, ngwa na ngwanrọ. Ndepụta data dị ka mmemme webụsaịtị na nnọkọ nwere ike inye aka maka ndị otu chọrọ ịgbatị webụsaịtị ha, mee ka arụ ọrụ nke ngwa ahụ dị ọhụrụ, ma ọ bụ tinye mgbakwunye ọrụ iji gboo ihe ndị na-achọwanye okporo ụzọ.
Kedu ihe nlebanya sava weebụ nwere ike nyochaa?
Ebumnobi bụ isi nke nlebanya sava weebụ bụ ichekwa sava ndị ahụ pụọ na ihe iyi egwu na ọdịda enwere ike. Ikpokoro nlekota ihe nkesa webụ na-enyere ụlọ ọrụ aka site na ịnakọta metrik arụmọrụ sitere na nkesa ọ bụla gụnyere na akụrụngwa IT, nke nwere ike iji chịkwaa n'ozuzu arụmọrụ na ahụike nke ngwaọrụ.
Enwere ụdị metric abụọ nke ihe nleba anya nke sava weebụ -
metrik njikọ: Na-esochi njikọ dị n'etiti ihe nkesa na ndị ọrụ dị ka ọnụego arịrịọ, oge nzaghachi, nha nzaghachi, na njikọ nọ n'ọrụ.
Metiriks ndị ọbịa: Tulee ahụike nke ngwaọrụ, ngwa, na/ma ọ bụ webụsaịtị akwadoro na sava weebụ gụnyere oge, ojiji CPU, ojiji ebe nchekwa, cache na eri.
Nleba anya nkesa na webụ na-atụkwa ibu onye ọrụ, ọsọ arụmọrụ zuru oke yana ọkwa nchekwa nke sava ahụ. Ọ na-enye ụlọ ọrụ ọgụgụ isi ịghọta na idozi nsogbu na ihe egwu nwere ike tupu ha emetụta ahụmịhe onye ọrụ njedebe.
Kedu otu ikpo okwu nlebanya sava weebụ si enyere ụlọ ọrụ aka?
Ikpokoro nlekota ihe nkesa webụ dị ka Motadata gụnyere ọtụtụ atụmatụ na-enye nleba anya dị oke egwu na arụ ọrụ site na arụmọrụ nke sava weebụ niile n'ime akụrụngwa IT. Usoro nlekota ihe nkesa weebụ dị otú ahụ dabara na data dị adị na ndekọ akụkọ ihe mere eme, nke na-enye ndị nchịkwa netwọk ohere ngwa ngwa chọpụta ihe omume ma ọ bụ omume na-adịghị ahụkebe na akụkụ nke ihe nkesa na-eche ihu oge nkwụsị.
Motadata bụ igwe nlebanya ihe nkesa agbakwunyere nke na-ebuga nkọwa nghọta nke oke arụmọrụ sava niile dị mkpa dị ka ike diski ike, ojiji CPU, ojiji ebe nchekwa na ojiji bandwidth site na njikwa webụ nwere ọgụgụ isi. Nleba anya arụmọrụ nkesa nke Motadata na-enye sysadmin ohere ịnọrọ n'elu oge nkwụsị nke ihe nkesa yana nsogbu arụmọrụ. Igwe nlebanya ihe nkesa a nwere ikike iji nyochaa ụdị sava akụrụngwa IT niile na ọnọdụ arụkọbara na nkesa. Chọpụta ihe gbasara arụmọrụ nkesa dị ka iji akụrụngwa, oge nkwụsị ngwa, na nkezi ya. oge nzaghachi.
Ọ na-enyekwa akụrụngwa ịdọ aka na ntị iji dobe ndị ọrụ nkwado IT na ndị niile metụtara ya na-agwa ha gbasara ihe egwu nwere ike ime, ụkọ akụrụngwa na okwu ọrụ ndị ọzọ. Ọ na-enyekwa dashboards na akụkọ, nke na-enye ụlọ ọrụ ohere ịlele metrik arụmọrụ ozugbo iji nyochaa sava weebụ.
NUM 2021 Mindarray Systems Pvt. Ltd., Ikike niile echekwabara.